Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in lagu tababaro soomaaliya dagaalyahanada boko – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in lagu tababaro soomaaliya dagaalyahanada boko
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa markii ugu horeysay wuxuu sheegay in dagaalyahanada u dagaalama Boko Haram lagu tababaro gudaha dalka Somaliya, kadibna ay u ambabaxaan dalka Nigeria si ay halkaasi uga dagaalamaan.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hadalkaan wuxuu ku sheegay Khudbad uu shalay ka jeediyay Shir ammaanka looga hadlaayay oo ka socday Magaalada Munich ee dalka Jarmalka.
Waxa uu tilmaamay Madaxweynaha Somaliya inay jiraan cadeymo muujinaya in dagaalyahanada Boko Haram lagu tababaro gudaha dalka Somaliya, kadibna dalkaasi ay u dagaal tagaan.
“Deganaansho la’aanta Somalia, waxay saamayn doontaa Deganaansho la’aanta dalalka Geeska Afrika iyo guud ahaa Qaaradda Afrika” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo tilmaamay inay jiraan Caddaymo markhaati u ah in mararka qaarkooda Maleeshiyadda Boko Haram lagu tababaray gudaha Somalia, kadibna ay ku laabtaan Nigeria.
Inkastoo Madaxweynaha Somaliya uusan si rasmi ah u cadeynin halka rasmi ahaan Somaliya ay kaga tababartaan Dagaalyahanada Boko Haram iyo cida tababarta ayuu hadana hadalkiisa ku micneeyay jiritaanka in Boko Haram tababarkaasi ay Somaliya ku qaataan.
Madaxweynaha wuxuu cadeeyay Ururada Islaamiyiinta ah inay yihiin kuwa isku xiran oo isku feker ah, inkastoo magacyo kala duwan ay leeyihiin, hadana ay yihiin qatar amni oo Gobolka haysata.
Somaliya waxaa ka dagaalama Ururka Shabaab oo awood muuqata kala soo horjeeda Dowladda Federalka Somaliya, inkastoo Gobolka Geeska Afrika ay ka jiraan Ururo kale oo Jihaadiyiin ah, hadana Somaliya Ururka ka dagaalama kaliya waa Shabaab ee Dowladda ka soo horjeeda.
Al-Shabaab oo sheegay inay duqeyn la beegsadeen garoonka diyaaradaha Kismaayo
Michael Keating oo markii ugu horeysay gaaray Magaalada Baydhabo (Daawo Sawirada)